Ragga isu galmooda oo lagu faqooqo suuqa shaqada - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Ragga isu galmooda oo lagu faqooqo suuqa shaqada
La daabacay tisdag 16 april 2013 kl 09.41
Ragga isu galmooda ayaa ka mushaar liita, isla-markaana ey kaga adag tahay sidii ey dallaacaad uga gaari lahaayeen goobaha shaqada marka loo barbar-dhigo haweenka isu galmooda, sida ku cad baaritaan laga soo saaray jaamicadda Linné (Linnéuniversitetet). Mats Hammarstedt oo ah caalin ku takahsusay culuunta dhaqaalaha qaranka, isla-markaana gacan ka geeystay cilmi-baaristan ayaa sheegay in faqooqa iyo fikradaha xaqiiqda ka fog ee goobaha shaqada kala soo gudboonaada ragga isu galmooda ey hor-seedaan mushaarooyin hooseeya.
- Faqooqa lagu hayo ragga khaniisiinta ah ayaa ka badan midka la soo gudboonaada haweenka isu galmooda. Sidoo kale waxaa jira faqooq lagula kaco haweenka isu galmooda, hase yeeshee uma baaxad ballaarna sida kuwa ragga khaniisiinta ah. Waxaa dhacda in haweenka isu taga la faqooqo kolka la shaqaaleeyneyo, balse kolka laga hadleyo mushaarooyinka waxey qaataan kuwo u dhigma haweenka kale.
Mats Hammarstedt oo ey weheliyaan laba caalin oo kale ayaa cilmi-baaris ku sameeyey hab-nololeedka ragga isu galmooda ee degmooyin kala duwan iyo is barbar-dhig 4 000 oo ruux hab-dhaqankooda galmood iyo mushaarooyinka ey qaataan dadyoowgaasi. Iyadoo ey u soo baxdey natoojooyin ah in degmooyinka sida aan wanaag-saneyn loogala dhaqmo ragga isu galmooda ey shaqa la'aantu kaga badan tahay, isla-markaana kaga mushaarad liitaan.
Cilmi-baaristan ayay natiijada ka soo baxday si cad u qeexday xiriirka ka dhexeeya khaniisnimada iyo mushaarka hooseeya, iyadoona uu Mats Hammarstedt sheegay in sababtu tahay in qaar ka mid ah madaxda goobaha shaqadu u qiimeeyaan hab-dhaqanka shaqaalaha iyo fikirrada aan aasaaska laheyn kolka ruux la shaqaaleeyneyo ama mushaarooyinka laga wada xaajooneyo.
Hase yeeshee ay adag tahay in si buuxda loo qeexo saameeynta ay khaniis-nimadu ku leedahay heerka mushaarrada, sida uu qabo Mats Hammarstedt:
- Xaqiiq baaxadda ay saameeyntaasi le'eg tahay lama caddeeyn karo, waxaase muuqata iney ragga isu galmooda kaga saameeyn ballaaran tahay kolka loo barbar-dhigo haweenka isu galmooda.
Iyada oo sidaa ay tahay ayaa haddana la oran karaa in qiyaastii ey mushaarooyinku ku kala hooseeyaan 11% waa kolka laga hadleyo dhanka ragga, halka aanu jirin farqi u dhexeeya mushaarooyinka haweenka. Intaa waxaa dheer iney ku adag tahay ragga isu galmooda sidii ey uga gaari lahaayeen heer sare goobaha ey ka howl-galaan, khaasatan kolka laga hadleyo shaqooyinka ey sida caadiga ahi raggu ku badan yihiin:
- Ragga isu galmooda ayaa lagu faqooqaa kolka ey shaqo ka doontaan shaqooyinka ey raggu ku badan yihiin. Dhanka kale waxaa ku adag sidii ey hor-u-kac ugu sameeyn lahaayeen xirfado kala duwan, sida cilmi-baarista lagu ogaadey.